१२ वर्षे नेहारीकाको यो आवाज सुन्नुहोस् , सा.रे.ग.म ले किन दियो यति सानी नानीलाई धो;का ? - Microlink Media::News Media Website
१२ वर्षे नेहारीकाको यो आवाज सुन्नुहोस् , सा.रे.ग.म ले किन दियो यति सानी नानीलाई धो;का ?
बुटवल बस्ने १२ बर्षकि नेहरिका ढुंगानामा एक चम्किलो तारा हुन्। सानै उमेर देखि नै उनमा एक जादु छ। उनि सानै उमेर देखि नै गीतमा धेरै नै रुचि राख्ने भएको हुनाले उनलाई एक ठुलो कलाकार बन्ने लक्ष्य राखेकी छिन्। स्कुल कार्यक्रममा उनि सधै सहभागिता जनाउने गर्छिन। उनको स्वर धेरै नै राम्रो भएको हुनाले उनलाई बुबा आमा सबैको सपोर्ट रहेको छ। बुबा आमाको एक सपना पनि हो कि आफ्नो छोरिलाई एक कलाकार बनाउने।
नेहरिका ढुंगानामा कक्षा ७ मा पढ्दै छिन्। ८/९ बर्षको उमेर देखि गीत गाउँन थालेकी नेहारिकाले अहिले बागेश्वरी संगीतालय मा गीत पनि सिक्दै छिन। घरमा ५ जनाको परिवारमा उनि कान्छी छोरी हुन्। ग्यालक्सि टि भी ले संचालन गरेको लिटिल च्याम्प कार्यक्रममा उनले भनि भाग लिएकी थिइन् उनि सेलेक्ट भनीन पनि। त्यस सो मा उनि छानिएपछि उनमा खुशीको सिमा नै भएन। अब अर्को राउण्डको लागि काठमान्डौ गएर आफ्नो प्र’तिभा देखाउन पाउछु भनेकी उनले पाईनन।
लिटिल च्याम्पका जजहरुले नै उनको गीतहरु मन पराएर छानिएका थिए तर किन अर्को राउण्डमा नाउँ भने उनलाई पनि थाहा छैन। जब अर्को राउण्डमा जनाले खबर आयो नेहारिका को मन खिन्न भयो ,सपना सबै टुटेजस्तो भयो। जिन्दगीनै सहिएको जस्तो भयो। उनले यस्तो खबर सुन्न साथ् कोठामा गएर एक्लै रुन थालिन। बुबा आमाले धेरै नै सम्झाउन खोजेपनि उनि दुखि नै भईन्। बुबा आमाले धेरै नै सम्झाई बुझाई गरेपछि मात्र उनले आफ्नो मन बुझाईन। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
दशैंको बेला जो कोहिलाई रुवाउने सुदनको स्वर सुन्नुहोस्, दुर्गम गाउँमा भेटिएको एक प्रतिभा (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
हे भगवान ! आजै अमेरिका जाने दिन तर अनिता घर मै मृ’त फेला (भिडियो सहित हेर्नुहोस )
सीता भण्डारी मृ”त्यु प्र’करण… श्रीमान, आमाजु र जेठाजुलाई भयो का’रागार चलान (भिडियो सहित हेर्नुहोस )
श्रीमतीले हानिन् श्रीमानको गु’प्ताङ्गमा ! रमेशको मृ’त्युपछि छोरी र श्रीमती समातिए ? (भिडियो सहित)
सबैले बौलायो भनेका नेत्रले राता रात बनाए ७० लाखको घर, टिकटक चलाएर झुपडीबाट महल सम्म पुगे नेत्र भुसाल (भिडियो सहित)
अनुहार नचाएर सबैको दिलमा बसेकी गीता ओली ! सबैले मायाले काली भन्छन्-काठमाडौँबाट मिडियामा
दशैं नजिकिए संगै यस समयमा धेरै व्यक्तिहरु आफ्नो घर सजाउन तर्फ...
रुपन्देहीमा फेरी एक सोच्ने नसकिने घ’टना घटेको छ। जहाँ रुपन्देही धबाहामा...
रूपन्देहीकी २७ वर्षीया सीता भण्डारीको मृ’त्यु प्रकरणमा प’क्राउ परेका तीन जना...
भनिन्छ श्रीमान भगवान, बाबा भगवान तर गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउपालिका १...
पछिल्लो समयमा टिकटक सबैको साथि भएको छ। आफु जे जस्तो अवस्थामा...
पछिल्लो समय मा सामाजिक संजाल मा टिकटक धेरै को साथि बनेको...
यी युवतीको कुकुरसँग अचम्मको प्यार ! यो रमाइलो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नुहोस्
पछिल्लो समयमा सामाजिक संजाल टिकटक सबैको साथि बनेको छ। टिकटकले धेरै...
अर्को अचम्म ! अंशु बर्मा पछि टिकटकबाट महिनामै लाखौँ लाख कमाउने यी हुन् 22 वर्षे मन्दिरा ढुंगाना (भिडियो सहित)
यतिबेला सबैमाँझ लोकप्रिय बन्दै गर्यरहेको छ, टिकटक याप । के बुढा,...
टिकटक लाइभबाट करोडौं कमाए भन्ने अंश बर्माको वास्तविकता के हो ? घर, घडेरी देखि कार सम्म
पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालमा भाइरल भएको एक एप्लिकेशन हो टिकटक। टिकटक...
एकै घरका ३ जान मरे, बर्दियामा हेर्नुहोस्… छिमेकीले थापेको पासोमा भित्र परे आफ्नै छिमेकीहरु
बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ गोदाना भन्ने ठाउँमा शुक्रबार राति जंगली जनावरलाई था’लेको...